Archive du 20170613
Claudine Razaimamonjy Nalefa eny Antanimora
Ny zoma 7 aprily teo no nivoaka ny didim-pitsarana teny amin’ny fitsarana manokana miady amin’ny kolikoly (CPAC) eny 67 Ha amin’ny hampidirana am-ponja vonjimaika an’i Claudine Razaimamonjy saingy omaly alatsinainy 12 jona hariva vao tanteraka.
Lalàm-pifidianana vaovao Mijanona ho tsiambaratelom-panjakana
Hatolotry ny komity fakan-kevitra ny praiminisitra amin’izao tapaky ny volana jona 2017 izao ny volavolana tolo-dalàna fanavaozana ny lalàm-pifidianana avy amin’ireo hery velona samihafa eto amin’ny firenena nangonin’ny Vaomiera nasionaly mahaleotena misahana ny fifidianana nanomboka ny taona 2016.
Lalàmpanorenana Tadiavin’ny HVM hovaina samirery
Samy miteniteny ny resaka fanovana lalàmpanorenana mialoha ny hanatanterahana fifidianana ireo antoko politika sy hery velona isan-tsokajiny. Varotra omby anaty ambiaty anefa ny ankabeazany ary mifono hevi-petsy.
Depiote TIM Boriborintany faha-6 Manampy hatrany ny tanora eny Ambohimanarina
Feno hipoka ny efitrano malalaky ny Boriborintany faha-6 teny Anosisoa Ambohimanarina, ny sabotsy teo, nandray ireo ankizy niisa 200 nanaraka an’ilay « révision CEPE » nokarakarain’ny « Association Katraka Live »
Taratasin’i Jean Ingahy mpandinika
Miarahaba anao ary aho izany ry ingahy mpandinika fa vita ihany ny vina na dia 2 taona be izao aza no lany andro nandinika foana.
Fitakian’ireo dokeran-tsambo Mety hiafara amin’ny fikatonan’ny seranan-tsambo
Rehefa tsy afaka nandray ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ireo mpiasa an-tsambo (SYGMMA) sy ireo dokera miasa ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ary ny avy eo anivon’ny
“Racing Madagascar” Raikitra ny andiany faharoa
Hotontosaina ny 11 ka hatramin’ny 16 jolay any Antsiranana ny andiany faharoa amin’ny Racing Madagascar na ny hazakazaka an-tongotra “trail running à Madagascar” izay karakarain’ny Boogie Events, tarihan’i Patrice Raoull,
Volo ngita mifandray tendro !
Vaovao lehibe ny nampidirana ilay ramatoa malaza tamin’ny resaka kolikoly eny Ambaniatsinanana, araka ny fomba fiteny.
Ady amin’ny famotsiam-bola Tsy vitan’ny SAMIFIN samirery
Tanjon’ny Samifin (Sampandraharaha Malagasy iadiana amin’ny famotsiam-bola sy ady amin’ny famatsiambola ny fampihorohoroana) ny ho mpikambana ao anatin’ny vondrona Egmont amin’ny taona 2018.
Seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato Mahazaka mpandeha 1,5 tapitrisa isan-taona
Hasiam-panitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato. Eo akaikin’ny BANI no hanatanterahana ny asa, ezahina hahazaka mpandeha hatrany amin’ny 1,5 tapitrisa isan-taona, izany hoe avo telo heny amin’ny isa zakan’ny etsy Ivato amin’izao fotoana,
Andron’i Mandela tao Fianarantsoa Nahazo “connexion” maimaimpoana tamin’ny Airtel ny oniversite
Hankalazaina manerana ireo oniversite misy eto amintsika ny Mandela Day na andron’i Mandela isaky ny datin’ny 18 jona. Ho an’ny orinasam-pifandraisana Airtel Madagascar manokana dia ny 09 jona lasa teo no nanamarihany izany izay nifandraika indrindra tamin’ny fitsingerenan’ny faha-40 taonan’ny oniversiten’i Fianarantsoa.
Sekoly Edenah Ambohimanarina Nanazava ny fiovan’ny fandaharam-pianarana
Nanatanteraka fivoriana farany niarahana tamin’ny ray aman-drenin’ny mpianatra teny Antanjombe Ambohimanarina ny sekoly Edenah ny faran’ny herinandro teo.
NY AMPINGA Namoaka mpianatra 150 mianadahy indray
Namoaka ny andiany fahasivy misalotra ny anarana “Antsiva” indray ny fikambanana Ny Ampinga ny faran’ny herinandro teo,
Herisetra sy asan-jiolahy Tena malemy ny fanjakana
Mampiteny ny moana ny resaka tsy fandriampahalemana eto amin’ny firenena. Tsy an-drenivohitra tsy eny ambanivohitra fa dia manerana ny firenena mihitsy.
Dilàna Morarano Chrome Ataon’ny jiolahy fahirano
In-tsivy sahady izay ny jiolahy no nandravarava ny tanàna ao Dilàna fokontany Andoharano kaominina Morarano Chrome.
Nanatevin-daharana ny fikambanana mpanao asa soa Rotary Club Lac Alaotra ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany any Ambatondrazaka Rakotomavo Herisoa Beberto.